Kaspersky 2010 ကို offline update ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? — MYSTERY ZILLION
Kaspersky 2010 ကို offline update ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
September 2010 edited September 2010 in Antivirus & Virus
ကျနော် Kaspersky antivirus 2010 ကို လိုင်စင် နဲ့သုံးပါတယ်။ ခက်တာက သူ့ကို update ယူဖို့ဆိုရင် စက်ကို နက်ဆိုင်ပဲ သယ်သွားနေရတယ်ဗျာ... သူ့ကို offline update လုပ်လို့လဲ မရဘူးဖြစ်နေတယ်.. သိတဲ့သူများရှိရင် ဒီပြသနာကို ကူညီဖြေရှင်းပေးပါလား ဗျာ...............။
Offline Update လုပ်ချင်ရင် Online ချိတ်ထားတဲ့ စက်တစ်လုံးက Update File ကိုယူပြီး ကိုယ့်စက်မှာ Offline Update ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဆိုင်တွေမှာ ဒေါင်းထားတဲ့Update ဖိုင်တွေရှိတယ်။ အဲဒါကို သွားယူလိုက်လေ။ ပြီးလို ့ဆီရင် Setting ထဲမှာ Update နဲ ့ပတ်သတ်တဲ ့ဟာရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ် သိမ်းထားတဲ့Offline ဖိုင်ရှိတဲ ့နေ ရာကို လမ်းကြောင်းပေးလိုက်။ အဆင်ပြေတယ်။ လုပ်ကြည် ့ပါ။
ဒီဆိုဒ်ကနေ ဒေါင်းလို့ရပါတယ် . .2011 အတွက်လည်းရှိတယ် . .ဖိုင် size ကတော့ကြီးတယ်နော် . . 150MB လောက်ရှိတယ် . .:rolleyes:
ဒီဆိုဒ်က သွားယူလိုက်ပါဗျာ http://www.officextracts.com/download.php အားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် size ကတော့ မမှန်ဘူးဗျ နဲနဲကြီးမယ် 152MB လောက်ရှိတယ် တစ်ခါတစ်လေ 160 MB တောင်ပဲဖြစ်သွားတယ်... အဆင်ပြေပါစေဗျာ...
ကျေးဇူးပါဗျာ.... ခုလို စိတ်၀င်တစားနဲ့ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် .... ။ နောက်ကျရင်လည်း ပြသနာအမျိုးမျိုးကို လက်တွဲ ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ....။
thanksalot. I am find this site.
I don't understand fully, pls explain me detail. I'm not familarize in this case. But I'm already download update file for KAV12. Thank u.
I'm seaman , so we're not have time. Help Me .
Pls send me by mail to : [email protected]
သိလို့တော့ မဟုတ်ပါ။ ဘော်ဘော်ကြီး ကို ရှင်းပြနေရင် အိုင်က တိုင်ပင် မရတော့ အနီးစပ်ဆုံးကူညီပေးမယ်နော်။ asia plaza ပထမလွှာကိုသွားလိုက်ပါ။ အလကား ပေးပါတယ်။ ရှာရလဲလွယ်ပါတယ်။ တောင်းရလဲလွယ်ပါတယ်။ လုပ်နည်းလဲသင်ပေးတယ်။ အကုန်ကူညီပေးနေပါသကော။။။။